လာမယ့် ၂၀၂၀ မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ လျာထားတဲ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေတိုင်း မဲပေးခွင့်ရဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ ကော်မရှင် ဘက်က ပြောပါတယ်။ ခုချိန်ထိ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲ ပြင်ဆင်မှုတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ တိတိကျကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့တဲ့ အပေါ် ပါတီတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်တဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေဘက်က ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာကို မမေခက ပြောပြပေးပါမယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ကော်မရှင်ဘက်က လာမယ့် ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေတိုင်း မဲပေးခွင့်ရဖို့ ကော်မရှင်ဘက်က ပြင်ဆင်ထားမှု အပေါ် အလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကမေးမြန်းတာကို ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်အောင် က ခုလို ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
“ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လထိ ပြုစုပြီး အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမှာ ၃၇သန်းကျော် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းရွေ့ပြောင်း လုပ်သားတွေ၊ တိုက်ပွဲရှောင် ပြည်သူများနှင့် အစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပမှာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသူများ အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။တပ်မတော်သားတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို အခြေခံမဲစာရင်းမှာထည့်သွင်းရန် ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။”
လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာ ကျင်းပတော့မယ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကော်မရှင်အဖြေက ဒီထက်ပိုပြည်စုံသင့်တယ်လို့ ထောက်ပြမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိချိန်ထိ ကော်မရှင်ဘက်က ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့် နေ့ရက်အတိအကျကို ထုတ်ပြန်ပေးထားတာ မရှိသေးပါဘူး။ လတ်တလော ကူးစက်ပျံ့နှံလွယ် တဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်မှုမရှိအောင် လူစုလူဝေး မလုပ်ဆောင်ဖို့ အစိုးရဘက်က တားမြစ်ထားသလို လက်ရှိအချိန်အထိ ရောဂါကူးစက် မှု ရှိနေသေးတဲ့ အပေါ်မှာ ရွေး ကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာပါ။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ တွင်းမှုး ဦးအေးကျော် ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ကော်မရှင် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အားမရဘူးလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
“ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေကတော့ကော်မရှင်ကို အားမရမှုမရှိပါဘူး။ တကယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံရေး ပါတီတွေက တာဝန်ရှိခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဖိတ်ပြီတော့ ကော်မရှင်နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ရက်တို့ အချိန်တို့ သတ်မှတ်တာမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ်။”
နိုင်ငံရေး ပါတီတွေဘက်ကဒီလိုအချိန်မှာပါတီကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလောင်းရွေးဖို့၊ ပါတီကိုယ်စား လှယ်လောင်းတွေကို ပါတီဆိုင်ရာနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ရာ မူဝါဒရေးရာ လမ်းညွှန်ဖို့ အတွက် လုပ်ဆောင်ရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုတွေ လုပ်ဆောင်တာမှာ ရောဂါ မကူးစက်အောင် သတ်မှတ် ချက်တွေလိုက်နာ ဖို့ ခက်ခဲမှုတွေရှိလာမှာ ၊ ရောဂါ ကူးစက်တာ မပျောက်သေးချိန်မို့ ထိုက်သင့်သလောက် မဲဆွယ်စည်းရုံးနိုင်ဖို့ ခက်ခဲတာတွေကြုံရင် အင်အားနည်းတဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေအောင်နိုင်ရေး အပေါ် ရတက် မအေးဖြစ်နေရတာမို့ ပါတီတွေဘက်က ကော်မရှင်ပြင်ဆင်မှု၊ ပါတီတွေအနေနဲ့ ဘယ်လို ကျော်ဖြတ်မလဲ ဆိုတာတွေ ဆွေးနွေးလို ကြပါတယ်။
လက်ရှိအာဏာရ NLD ပါတီဘက်ကတော့ ကော်မရှင်လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးဖို့ ငြင်းဆိုပေမယ့်ကော်မရှင်ဘက်က ပါတီတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ညိနှိုင်းမှု မရှိတာကိုတော့ သိပ်တော့ဘဝင်မကျလှပါဘူး။
“ မေးတဲ့ထဲပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုကော်မရှင် အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ညှိုနှိုင်းတိုင်ပင်မှု ရှိလားဆိုတာကတော့ ခုထိတော့မရှိပါဘူး. မကြားလဲမကြားသေးဘူး။ အဲဒီအပေါ်တခြားမှတ်ချက် ကျနော်မပေးလိုသေးပါဘူး ကော်မရှင်အနေနဲ့ သူ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ သူ့အချိန်နဲ့ သူ လုပ်နေတာမို့ တချိန်ချိန်တော့ အကြံပေးသလိုဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့”
ပါတီပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ မုံရွာအောင်ရှင် ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ I PEACE အဖွဲ့က စိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်ကတော့ ကော်မရှင်အနေနဲ့ တရားမျှတတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ နိုင်ဖို့ နဲ့စွပ်စွဲမှုတွေ မကြုံရဖို့ဆိုရင် ကော်မရှင်လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ပါတီတွေ ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေဘက်က လက်ခံနိုင်ဖို့ ပွင့်လင်းစွာ ချပြပေးဖို့ နဲ့ ကိုဗစ်ကာလ ရောဂါပိုးကူးစက် မှုတွေရှိနေချိန် အတွင်းမှာ ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လို့ ပြင်ဆင်မှုပိုင်းကို အမြန်ဆုံးချပြဖို့ ကော်မရှင်ကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါ တယ်။
“ကိုဗစ်ကာလမှာ လုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ပြင်ဆင်မှုက သာမန် အချိန်ပြင်တာနဲ့တူမှာတော့မဟုတ်။ ပါတီတခုချင်းမှာ မတူညီတဲ့ သဘောထားတွေရှိ။ အဲဒီသဘောထားတွေနားထောင်ပြီး အကောင်းဆုံးဘယ်လို အဖြေရှာမလဲဆိုတာ လုပ်ဖို့လိုတယ်။ COVID-19 ကာလမှာလုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ အရင်တုန်းက လုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေလိုမျိုး ရချင်မှ ရမယ်။ ဘယ်အခွင့်အရေးကိုတော့ ရနိုင်တယ် ၊ ဘယ်ဟာတွေကတော့ မရဘူး ဆိုတာကို နိုင်ငံရေးပါတီတွေကြားထဲမှာ ကော်မရှင်နဲ့ သဘောတူချက် ရပြီးမှ လုပ်တာ ပိုကောင်းတယ်။ ”
လက်ရှိကော်မရှင်ဘက်က ထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်အရ လာမယ့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲပေးခွင့်ရှိသူ အရေအတွက်ဟာ ၃၇သန်းရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထဲမှာတပ်မတော်သား မိသားစုဝင်တွေန ပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားတွေ မပါသေးပါဘူး။ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၀၀နီးပါးရှိနေပြီး ၂၀၂၀ မှာ အသုံးပြုမယ့် မဲလက်မှတ်ဟာ အဖြူရောင်ဖြစ်တယ်လို့ လည်းကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်။
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ပတျသကျလို့ ကျောမရှငျရဲ့လုပျဆောငျမှုတှအေပျေါ အားရမှုမရှိကွောငျး နိုငျငံရေးပါတီတှပွေော
လာမယျ့ ၂၀၂၀ မှာ ကငျြးပပွုလုပျဖို့ လြာထားတဲ့ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲပေးခှငျ့ရှိတဲ့ပွညျသူတှတေိုငျး မဲပေးခှငျ့ရဖို့ စီစဉျထားတယျလို့ ကျောမရှငျ ဘကျက ပွောပါတယျ။ ခုခြိနျထိ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ဘယျလိုပွငျဆငျထားလဲ ပွငျဆငျမှုတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတာ တိတိကကြထြုတျဖျောပွောဆိုတာမရှိခဲ့တဲ့ အပျေါ ပါတီတှနေဲ့ ရှေးကောကျပှဲ လလေ့ာစောငျ့ကွညျ့တဲ့ အရပျဘကျအဖှဲ့တှဘေကျက ရှေးကောကျပှဲအပျေါ စိုးရိမျမှုတှရှေိနတောကို မမခေက ပွောပွပေးပါမယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဇှနျလ ၁ရကျနကေ့ကငျြးပခဲ့တဲ့ အမြိုးသားလှတျတျောမှာ ကျောမရှငျဘကျက လာမယျ့ ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲပေးခှငျ့ရှိတဲ့ ပွညျသူတှတေိုငျး မဲပေးခှငျ့ရဖို့ ကျောမရှငျဘကျက ပွငျဆငျထားမှု အပျေါ အလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ကမေးမွနျးတာကို ကျောမရှငျ အဖှဲ့ဝငျဦးမွငျ့အောငျ က ခုလို ပွနျဖွခေဲ့ပါတယျ။
“ ၂၀၂၀ ခုနှဈ မတျလထိ ပွုစုပွီး အခွခေံမဲဆန်ဒရှငျစာရငျးမှာ ၃၇သနျးကြျော ဖွဈပါတယျ။ ပွညျတှငျးရှပွေ့ောငျး လုပျသားတှေ၊ တိုကျပှဲရှောငျ ပွညျသူမြားနှငျ့ အစိုးရရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ နိုငျငံပွငျပမှာ သှားရောကျလုပျကိုငျနသေူမြား အားလုံးပါဝငျနိုငျရေးအတှကျ စိစဈဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။တပျမတျောသားတှနေဲ့ မိသားစုဝငျတှကေို အခွခေံမဲစာရငျးမှာထညျ့သှငျးရနျ ကနျြရှိနပေါသေးတယျ။”
လာမယျ့နိုဝငျဘာလမှာ ကငျြးပတော့မယျရှေးကောကျပှဲနဲ့ ပတျသတျလို့ ကျောမရှငျအဖွကေ ဒီထကျပိုပွညျစုံသငျ့တယျလို့ ထောကျပွမှုတှရှေိခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိခြိနျထိ ကျောမရှငျဘကျက ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပမယျ့ နရေ့ကျအတိအကကြို ထုတျပွနျပေးထားတာ မရှိသေးပါဘူး။ လတျတလော ကူးစကျပြံ့နှံလှယျ တဲ့ ကိုဗဈ ၁၉ ကူးစကျမှုမရှိအောငျ လူစုလူဝေး မလုပျဆောငျဖို့ အစိုးရဘကျက တားမွဈထားသလို လကျရှိအခြိနျအထိ ရောဂါကူးစကျ မှု ရှိနသေေးတဲ့ အပျေါမှာ ရှေး ကောကျပှဲကငျြးပနိုငျပါ့မလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှနေဲ့ စိုးရိမျမှုတှရှေိနတောပါ။
ရခိုငျဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ အထှထှေေ တှငျးမှုး ဦးအေးကြျော ကတော့ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျရေးအတှကျ ကျောမရှငျ လုပျဆောငျခကျြတှကေို အားမရဘူးလို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
“ နိုငျငံရေး ပါတီတှကေတော့ကျောမရှငျကို အားမရမှုမရှိပါဘူး။ တကယျရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပမယျဆိုရငျလညျးနိုငျငံရေး ပါတီတှကေ တာဝနျရှိခေါငျးဆောငျတှနေဲ့ ဖိတျပွီတော့ ကျောမရှငျနဲ့ ညှိနှိုငျးပွီး ရှေးကောကျပှဲ ရကျတို့ အခြိနျတို့ သတျမှတျတာမြိုး ဖွဈစခေငျြတယျ။”
နိုငျငံရေး ပါတီတှဘေကျကဒီလိုအခြိနျမှာပါတီကိုယျစားပွု ကိုယျစားလောငျးရှေးဖို့၊ ပါတီကိုယျစား လှယျလောငျးတှကေို ပါတီဆိုငျရာနဲ့ ကိုယျစားလှယျဆိုငျရာ မူဝါဒရေးရာ လမျးညှနျဖို့ အတှကျ လုပျဆောငျရဖို့ ရှိနပေါတယျ။ ဒီလိုတှေ လုပျဆောငျတာမှာ ရောဂါ မကူးစကျအောငျ သတျမှတျ ခကျြတှလေိုကျနာ ဖို့ ခကျခဲမှုတှရှေိလာမှာ ၊ ရောဂါ ကူးစကျတာ မပြောကျသေးခြိနျမို့ ထိုကျသငျ့သလောကျ မဲဆှယျစညျးရုံးနိုငျဖို့ ခကျခဲတာတှကွေုံရငျ အငျအားနညျးတဲ့ တိုငျးရငျးသား ပါတီတှအေောငျနိုငျရေး အပျေါ ရတကျ မအေးဖွဈနရေတာမို့ ပါတီတှဘေကျက ကျောမရှငျပွငျဆငျမှု၊ ပါတီတှအေနနေဲ့ ဘယျလို ကြျောဖွတျမလဲ ဆိုတာတှေ ဆှေးနှေးလို ကွပါတယျ။
လကျရှိအာဏာရ NLD ပါတီဘကျကတော့ ကျောမရှငျလုပျဆောငျခကျြအပျေါမှတျခကျြပေးဖို့ ငွငျးဆိုပမေယျ့ကျောမရှငျဘကျက ပါတီတှနေဲ့ တှဆေုံ့ ညိနှိုငျးမှု မရှိတာကိုတော့ သိပျတော့ဘဝငျမကလြှပါဘူး။
“ မေးတဲ့ထဲပါတယျ။ ရှေးကောကျပှဲလုပျမယျဆိုကျောမရှငျ အနနေဲ့ ရှေးကောကျပှဲဝငျမယျ့ နိုငျငံရေးပါတီတှနေဲ့ ညှိုနှိုငျးတိုငျပငျမှု ရှိလားဆိုတာကတော့ ခုထိတော့မရှိပါဘူး. မကွားလဲမကွားသေးဘူး။ အဲဒီအပျေါတခွားမှတျခကျြ ကနြျောမပေးလိုသေးပါဘူး ကျောမရှငျအနနေဲ့ သူ့ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ သူ့အခြိနျနဲ့ သူ လုပျနတောမို့ တခြိနျခြိနျတော့ အကွံပေးသလိုဖွဈလာနိုငျတာပေါ့”
ပါတီပွနျကွားရေးတာဝနျခံ မုံရှာအောငျရှငျ ပွောဆိုခဲ့တာပါ။
ရှေးကောကျပှဲလလေ့ာစောငျ့ကွညျ့ရေးအဖှဲ့ I PEACE အဖှဲ့က စိုငျးရဲကြျောစှာမွငျ့ကတော့ ကျောမရှငျအနနေဲ့ တရားမြှတတဲ့ စဈမှနျတဲ့ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပ နိုငျဖို့ နဲ့စှပျစှဲမှုတှေ မကွုံရဖို့ဆိုရငျ ကျောမရှငျလုပျဆောငျမှုတှကေို ပါတီတှေ ၊ အရပျဘကျအဖှဲ့တှဘေကျက လကျခံနိုငျဖို့ ပှငျ့လငျးစှာ ခပြွပေးဖို့ နဲ့ ကိုဗဈကာလ ရောဂါပိုးကူးစကျ မှုတှရှေိနခြေိနျ အတှငျးမှာ ကငျြးပဖို့ပွငျဆငျနတေဲ့ ရှေးကောကျပှဲ ဖွဈလို့ ပွငျဆငျမှုပိုငျးကို အမွနျဆုံးခပြွဖို့ ကျောမရှငျကို တိုကျတှနျးလိုကျပါ တယျ။
“ကိုဗဈကာလမှာ လုပျမယျ့ ရှေးကောကျပှဲ ပွငျဆငျမှုက သာမနျ အခြိနျပွငျတာနဲ့တူမှာတော့မဟုတျ။ ပါတီတခုခငျြးမှာ မတူညီတဲ့ သဘောထားတှရှေိ။ အဲဒီသဘောထားတှနေားထောငျပွီး အကောငျးဆုံးဘယျလို အဖွရှောမလဲဆိုတာ လုပျဖို့လိုတယျ။ COVID-19 ကာလမှာလုပျတဲ့ ရှေးကောကျပှဲဟာ အရငျတုနျးက လုပျတဲ့ ရှေးကောကျပှဲတှလေိုမြိုး ရခငျြမှ ရမယျ။ ဘယျအခှငျ့အရေးကိုတော့ ရနိုငျတယျ ၊ ဘယျဟာတှကေတော့ မရဘူး ဆိုတာကို နိုငျငံရေးပါတီတှကွေားထဲမှာ ကျောမရှငျနဲ့ သဘောတူခကျြ ရပွီးမှ လုပျတာ ပိုကောငျးတယျ။ ”
လကျရှိကျောမရှငျဘကျက ထုတျပွနျပွောဆိုခကျြအရ လာမယျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ အတှကျ မဲပေးခှငျ့ရှိသူ အရအေတှကျဟာ ၃၇သနျးရှိတယျလို့ ပွောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီထဲမှာတပျမတျောသား မိသားစုဝငျတှနေ ပွညျပရောကျနိုငျငံသားတှေ မပါသေးပါဘူး။ မှတျပုံတငျထားတဲ့ နိုငျငံရေးပါတီ ၁၀၀နီးပါးရှိနပွေီး ၂၀၂၀ မှာ အသုံးပွုမယျ့ မဲလကျမှတျဟာ အဖွူရောငျဖွဈတယျလို့ လညျးကျောမရှငျကဆိုပါတယျ။
၂၀၂၀ ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲ ဝနယ်မှာ ကျင်းပနိုင်ရေး UWSP ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မယ်
တပ်ပြင်ပ မဲရုံထားရေးပြင်ဆင်ချက် လွှတ်တော် အတည်ပြု